သင်္ချာမေးခွန်းအခက်အခဲကြောင့်ဟုဆိုကာ ကြည့်မြင်တိုင်မျက်မမြင်သင်တန်းကျောင်းမှ ဆယ်တန်းကျော? - Yangon Media Group
သင်္ချာမေးခွန်းအခက်အခဲကြောင့်ဟုဆိုကာ ကြည့်မြင်တိုင်မျက်မမြင်သင်တန်းကျောင်းမှ ဆယ်တန်းကျော?
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၈- သင်္ချာမေးခွန်း အခက်အခဲကြောင့်ဟုဆိုကာ ကြည့် မြင်တိုင် မျက်မမြင်သင်တန်းကျောင်း မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူ ခုနစ်ဦးစလုံး ကျရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး ကြည့်မြင်တိုင်မျက်မမြင်သင် တန်းကျောင်းမှ အမြင်အာရုံ မ သန်စွမ်းသူ ခုနစ်ဦးဝင်ရောက် ဖြေဆိုခဲ့ပြီး သင်္ချာဘာသာရပ်၏မေးခွန်းအပြောင်းအလဲနှင့် အတူ အဆိုပါကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များဖြေဆိုနိုင်သည့် မေးခွန်းအရေ အတွက် နည်းပါးသွားခြင်းကြောင့် အဆိုပါကျောင်းသား၊ ကျောင်း သူများထဲတွင် အောင်မြင်သူမရှိခဲ့ ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကြည့်မြင်တိုင် မျက်မမြင်သင်တန်းကျောင်းမှ သိရသည်။
”ဒီနှစ်တစ်ဦးမှ မပါဘူးရှင်။ သင်္ချာမေးခွန်းအပြောင်းအလဲဖြစ် တော့ကလေးတွေရဲ့ ဖြေနိုင်တဲ့အ ပိုင်းကနည်းသွားတယ်။ သူတို့က တော့ဖြေနိုင်ခဲ့တယ် ပြောပေမယ့် မေး ခွန်းပြောင်းထားတာကြောင့် သူတို့တွက်ချက်စဉ်းစားခဲ့တဲ့ အပိုင်း များတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်အောင် မှတ်ရ၊ မရဆိုတာကို မမှန်းနိုင်ခဲ့ ဘူး။ စိတ်လည်းမကောင်းဖြစ်မိ ပါတယ်”ဟု ကြည့်မြင်တိုင်မျက်မ မြင်ကျောင်းအုပ် ဒေါ်ခင်ညိုထွန်း ကပြောသည်။
၂ဝ၁၉ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲကို ကြည့်မြင်တိုင်မျက်မ မြင် သင်တန်းကျောင်းမှမိန်းက လေးနှစ်ဦး၊ ယောက်ျားလေးငါး ဦး ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ပြီးနှစ်ဦးမှာ ကျောင်းသားဟောင်းများဖြစ် ကြောင်း ¤င်းတို့ကို ယခုနှစ်တွင် သင်္ချာဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး လာမည့်စာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုနိုင် ရန်အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
”သင်္ချာကို ဒီနှစ်အတွက် ဘယ်လို အကောင်းဆုံးဖြေနိုင်အောင် လုပ်ရမလဲဆိုတာ ကျွန်မတို့စဉ်းစား သွားရမှာပါ။ သူတို့တစ်တွေကို လည်း အားပေးရတာပေါ့”ဟု ဒေါ်ခင်ညိုထွန်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
၂ဝ၁၉ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲကိုအမြင်အာရုံမသန်စွမ်း စာဖြေသူရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ စစ် တိုင်းဒေသကြီးတို့မှ စုစုပေါင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ၂၄ဦး ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါတီခေါင်းဆောင်များ၏ ရုပ်ပုံသုံးစွဲမဲဆွယ်ခွင့် ပြု၊ မပြု အစိုးရအဖ